Amandla emarike yeshishini lezithuthuthu nge-sprocket akanakuthelekiswa nanto, edala amathuba amahle
I-China ingene kwizinga labavelisi abakhulu be-sprocket kwihlabathi, kodwa ngokwembono yamandla ewonke kunye nenqanaba lophuhliso, imveliso nganye yonyaka yezithuthuthu eziphuma ngesithuthuthu imalunga ne-1/5 kuphela yamazwe aphuhlileyo kwilizwe liphela, kwaye uninzi lwee-sprocket zesithuthuthu nangoku kumazwe aphesheya Ngaphandle kokudlula kwinqanaba le-C, isabelo sentengiso samanye amazwe samatyathanga amaTshayina simalunga ne-4.5% kuphela, ngenxa yoko i-China isekude ekungeneni kwizikhundla zamandla e-sprocket. Ke ngoko, lolona lwalathiso luphambili lokuphuhliswa kweshishini le-sprocket yase-China ukusuka kwilizwe elivelisa i-sprocket ukuya kumandla e-sprocket emhlabeni kwaye uthathe umendo omtsha wokwenza imisebenzi eneempawu zayo.
Nangona imarike yamanye amazwe ichatshazelwa zizinto ezingaqinisekanga kwaye zingenakulindeleka, ngophuhliso oluqhubekekayo kunye nokutsha kwezinto ezizenzekelayo kwimizi-mveliso kwihlabathi, imfuno yeemveliso ze-sprocket ziya kuba nkulu kwaye zikhulu. Ingakumbi iiprokhethi ziimveliso ezisebenza nzima. Yamkela indlela yokuthengwa kwehlabathi okanye ukutshintshela kwimveliso kumazwe asaphuhlayo, kwaye i-sprocket yimveliso yesiTshayina yemveli. Inenzuzo ethile yokukhuphisana namanye amazwe asaphuhlayo, azisa amathuba amatsha kunye nendawo yophuhliso lwe-China sprocket yokwandisa ukuthunyelwa kwelinye ilizwe. Okwangoku, imakethi ye-sprocket yahlulwe yangamabakala amathathu: aphantsi, aphakathi kunye aphezulu, ebonisa imeko esisiseko "yebanga eliphantsi linemfuno, ibanga eliphakathi linobumnandi, kwaye inqanaba eliphezulu linethemba". Nangona kunjalo, i-sprocket yaseTshayina ayikangeni kumbundu wentengiso ephezulu.
Ukuphuhliswa kweshishini le-sprocket kunembali ende, kwaye amathemba ophuhliso lwangoku nawo abanzi kakhulu. Ukusuka kuphuhliso olupheleleyo lweshishini le-sprocket, i-sprocket esemgangathweni iya kuncipha ngokuthe ngcembe kwaye imfuno yentengiso iya kuncipha ngokuthe ngcembe; sprocket engaqhelekanga Imfuno yeemveliso kunye nesabelo sentengiso esipheleleyo sonyuka kakhulu. Kufuneka kuthiwe i-sprocket ezingekho semgangathweni sisikhokelo sophuhliso kuyo yonke imveliso ye-sprocket. Amandla ayo emarike makhulu kwaye anethemba elibanzi lophuhliso. Kwangelo xesha, ngenxa yokuba i-pulley yebhanti ehambelanayo inezibonelelo zonikezelo lwevili lebhanti kunye neempawu zokudluliselwa kwe-sprocket, isabelo sentengiso se-pulley yebhanti ehambelanayo kuyo yonke imveliso yokuhanjiswa kwetyathanga iya kwandiswa kakhulu, kunye nethemba lophuhliso lwayo iya kuba nethemba kakhulu. Ubungakanani bemakethi abunakulinganiswa.
Iiproli ezingaqhelekanga kunye namavili ebhanti e-synchronous amele ulwalathiso lophuhliso lwexesha elizayo kunye nophuhliso oluqhelekileyo kuthotho lonke lwe-sprocket kunye nezinye izinto ezithunyelwayo. Amandla abo emarike makhulu kwaye anethemba elibanzi kakhulu lophuhliso. I-sprocket isetyenziswa ngokubanzi kuthumelo loomatshini beekhemikhali, oomatshini belaphu, ukuqhubekeka kokutya, izixhobo, ipetroleum kunye namanye amashishini. Inkqubo yokulungisa i-sprocket iyacima kwaye umphezulu wenze mnyama. Xa umyinge wesantya usezantsi, ukusebenzisa inamba ephezulu enezinyo kunokunciphisa kakhulu inani lokujikeleza kwekhonkco, umthwalo wokuqina wekhonkco kunye nomthwalo wokuthwala. Imijelo yentsimbi yentsimbi isetyenziswa ikakhulu kwimithombo eneemfuno ezichanekileyo eziphantsi okanye iimilo ezintsonkothileyo, ezinje ngokuvelisa iisaringi zeringi. Ke ngoko, ishishini le-sprocket linethemba elibanzi malunga nophuhliso kunye nokusetyenziswa.
Ixesha Post: Jul-07-2020